ကော့တေးလ်ဖျော်စပ်ကျွမ်းကျင်သူ Mixologist Francesco Moretti | Food Magazine Myanmar
by Pyone for Food Magazine
Francesco Moretti က မိသားစုထဲမှာ သူ့အစ်မလိုမျိုး အဖျော်ယမကာပိုင်းကို စိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ စံထားရတဲ့သူကတော့ ကောက်တေးဖျော်စပ်သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဥရောပချန်ပီယံလည်းဖြစ်တဲ့ အစ်မဖြစ်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဖျော်ယမကာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စောစောစီးစီး ဝါသနာထုံလာတဲ့ Francesco Moretti က သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်ကို အသက် ၁၈ နှစ် အရွယ်မှာ မိုနာကို (Monaco) မှာရှိတဲ့ Sea Lounge မှာ မီရှယ်လင်းစတားဆုရထားတဲ့ စားဖိုမှူး Jean-Claude Grugel ရဲ့ လက်အောက်မှာ စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ဒုတိယမြောက် အလုပ်ကိုတော့ မိုင်ရာမီ (Miami) မှာ လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီကနေ အမေရိကန်ရဲ့ ဘားပိုင်းဆိုင်ရာနည်းပညာများနှင့် အစားအသောက်ချက်ပြုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ စတဲ့ အတွေ့အကြုံတော်တော်များများကို ရရှိလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ပါရီကို အလုပ်ပြောင်းသွားပြီး မတူညီတဲ့ Mixology Skill တွေနဲ့ ပြင်သစ် အစားအသောက်ချက်ပြုတ်နည်းတွေကို သင်ယူရခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ပြိုင်ပွဲတွေအများကြီးကိုလည်း ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြင်သစ် Bacardi Mojito ပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆုရခဲ့ပါတယ်။ ဥရောပမှာ ၈ နှစ်လောက်နေပြီးချိန်မှာတော့ အာရှနဲ့ ရှန်ဟိုင်းဘက်ကို စတင်ခြေလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော် Bar Rouge မှာ ဘားမန်နေဂျာအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သူနောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ကတော့ VOGUE Lounge မှာဖြစ်ပြီးတော့ အာရှရဲ့ ထင်ရှား ထူးခြားတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပြီး တီထွင်ဖန်တီးချင်လာပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ပတ်ပြီး အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ ရလိုက်တာကြောင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေ လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး အခြေခံခိုင်မာလာစေတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဟန် Culinary Cocktail တို့ကိုလည်း တီထွင်လာနိုင်ခဲ့ပြီး ကော့တေးလ်ဖျော်စပ်ကျွမ်းကျင်သူ Mixologist အနေနဲ့ ယနေ့အထိ ဇောက်ချလုပ်ကိုင်နေခဲ့ပါတယ်။
အခုတလော ရန်ကုန်မြို့ပြ လူငယ်တွေကြားထဲမှာ သောကြာနေ့ ရောက်တာနဲ့ တစ်ပတ်တာပင်ပန်းခဲ့သမျှ Night OUt ထွက်ခြင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သူငယ်ချင်းများနဲ့ Gathering ထွက်ခြင်း စတဲ့အလေ့အထများဟာ အရင်ကထက် လျင်လျင်မြန်မြန် ဖွံ့ဖြိုးလာတာကို တွေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်ရှိလာသည်နှင့်အမျှ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဖို့အတွက် Bar တွေ၊ Restaurant တွေဟာ သူ့ထက်ငါ ကောင်းမွန်အောင် ကြိုးစားဖွင့်လှစ်ရင်း ဆိုင်မျိုးပေါင်းများစွာကို ရန်ကုန်မှာ တွေ့လာရပါပြီ။ အပြိုင်အဆိုင်များလာတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ဆိုင်တစ်ဆိုင် နာမည်ကောင်းထွက်ဖို့နဲ့ ရောင်းအားကောင်းဖို့ဆိုတာ အဲဒီဆိုင်ရဲ့ အစားအစာ အရည်အသွေး၊ အရသာရှိမှု၊ သန့်ရှင်းမှု၊ သပ်ရပ်မှု၊ အပြင်အဆင်စတဲ့ အချက်အလက်တွေအပြင် လုံးဝချန်လှပ်ထားလို့ မရတာကတော့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အစားအသောက်ကောင်းခြင်း၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ခြင်း တူနေရင်တောင် ဝန်ဆောင်မှုကောင်းတဲ့ဆိုင်ဟာ တစ်ခဏချင်း လူသိများပြီး ကျော်ကြားလာတာတွေကလည်း ငြင်းလို့မရလောက်ပါဘူး။ အခုတစ်ခါတော့ ရန်ကုန်မှာ လက်ရှိဖွင့်လှစ်ထားပြီး အစဉ်အလာကလည်း ကောင်းမွန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်း ရှိတယ်လို့ လူတွေကြားမှာ ပြောဖြစ်ကြတဲ့ ဘားတစ်ခုကို သွားကြည့်ကြရအောင်ပါ။ ဒီတစ်လမှာတော့ The Strand Hotel ရဲ့ မြေညီထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Sarkies Bar ရဲ့ လက်ရှိ ပဲ့ကိုင်ရှင် Mr.Francesco Moretti နဲ့ တစ်ခဏတာ အမေး၊ အဖြေလေးတွေကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
The Strand Hotel ရဲ့ ဟိုတယ်ဝင်ပေါက်ကို ဝင်လိုက်ပြီး ညာဘက်ကိုချိုးလိုက်ရင် Sarkies Bar ကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စားပွဲပေါ်က Bonzai ပန်းလေးတွေရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုနှင့်အတူ အေးအေးငြိမ့်ငြိမ့်လေးဖွင့်ထားတဲ့ ဂီတသံလေးဟာ မြို့ပြရဲ့ မွန်းကြပ်မှုကနေ အမှန်တကယ် ရုန်းထွက် သွားစေနိုင်တာတော့ ငြင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်ရဲ့ Local အငွေ့ အသက်ကလေးနဲ့ အနောက်တိုင်းဆန်ဆန် အပြင်အဆင်လေးတွေဟာ Classic နဲ့ Authentic ကို Balance ညီအောင် ခံစားစေနိုင်တာကတော့ ထူးခြားတဲ့ ဝိသေသလေးတွေပါပဲ။ ချိန်းထားတဲ့အချိန်ကို ရောက်တာနဲ့ ကြိုတင်ရောက်နှင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ Mr. Moretti ကို ယခုလို မေးခွန်းလေးတွေ စပြီးမေးဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့၊ Mr. Moretti ရဲ့ The Strand Hotel ရဲ့ Sarkies Bar မှာ စတင် တာဝန်မယူခင် အခုလို Bar Industry မှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ အရင်က အလုပ်အတွေ့အကြုံလေးကို ပြောပြပေးပါလား။
ကျွန်တော် ဒီအလုပ်ကို စတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကတော့ ၁၇ နှစ်သားမှာ စတင်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံးအလုပ်အတွေ့အကြုံကတော့ “Sea Lunge Beach Monaco” လို့ခေါ်တဲ့ Monte Carlo မှာရှိတဲ့ ဘားပါ။ အဲဒီဘားမှာ အလုပ်ကို စလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့ ကျွန်တော့် အစ်မကြောင့် ပါ ။ ကျွန်တော့်ရဲ့အစ်မက ၂၀ဝ၅ မှာ Europe Bar Champion တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကိုလည်း တကယ်ကို အစစအရာရာ သင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင် သူ့လိုဖြစ်ချင်တာက ကျွန်တော် ဒီအလုပ်ကို စခဲ့တာလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ပထမဆုံး မွန်တီကာလိုကနေ ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်ခဲ့တာ နိုင်ငံတော်တော်များပါတယ်။ စစချင်းက မွန်တီကာလို။ အဲဒီကနေမှ ပြင်သစ်၊ ပြီးတော့ အမေရိက (မီယာမီ)မှာ လုပ်ခဲ့ရင်းနဲ့ ကျွန်တော် ဘာသာစကားကိုလည်း တိုးတက်အောင် သင်ယူခဲ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် ပြင်သစ်ကို ပြန်ရောက်သွားပါတယ်။ အဲဒီမှာပဲ ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ချလိုက်တယ်။ အာရှဘက်ကို ကျွန်တော် ပြောင်းလဲပြီး အတွေ့အကြုံတွေ ရှာဖွေကြည့်မယ်လို့ပေါ့။
အာရှဘက်က ဘားတွေမှာရော ဘယ်လိုအတွေ့အကြုံတွေရလာလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါဦး။
အာရှမှာ ပထမဆုံး စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာကတော့ “Bar Rouge” Shanghai မှာ Bar Manager ကနေ စခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေ “Vogue Lounge Bangkok” ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဘန်ကောက်မှာ ကျွန်တော် Asain Style က ဘယ်လို အရသာမျိုးတွေကို ပိုပြီး ရင်းနှီးသလဲ၊ အကြိုက်တွေ့တတ်သလဲဆိုတာ လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးရင် ဈေးကွက် အနေအထားလိုအပ်ချက် စတာတွေကို သိအောင်လုပ်ခဲ့တယ် ။ အခု ဒီ Sarkies Bar မှာလိုပါပဲ။ ဒီနိုင်ငံက အမျိုးမျိုးသောူသခှေူစငခန တွေကို ပုဂံလိုနေရာမျိုးတွေကနေ ရှာဖွေခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ Vodka တို့ ဘာတို့ကို ပြည်တွင်း အမွှေးအကြိုင်အပင်တွေနဲ့ ရောစပ်ပြီး အရသာအမျိုးမျိုးသော အသစ်တွေကို ရှာဖွေထားပါတယ်။ အခု ဒီမှာတော့ ဘားမှာ ဖျော်စပ်တဲ့ ပညာရှင်တွေကတော့ ရှစ်ယောက်လောက်ပဲ ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ အကုန်လုံးက ဘာတွေ အသစ်ထပ်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။
Mr. Moretti ကို ဘားထဲမှာ တကယ်ကို ရွှင်လန်းတက်ကြွနေအောင်၊ ပျော်ရွှင်နိုင်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေဟာ ဘာတွေများဖြစ်နိုင်မလဲ။ ဘာတွေက စိတ်လှုပ်ရှားအောင် လုပ်နိုင်ပါသလဲ။
ကျွန်တော့်ကို ပထမဆုံး စိတ်ဝင်စားစေတဲ့အရာကတော့ ဧည့်သည်တွေက ကိုယ့်ဘားကို ဘာကြောင့်လာကြတာလဲဆိုတာကို နားလည်ခြင်းပါပဲ။ တချို့သောသူတွေက အဲ့ဒါကို သိပ်နားမလည်ကြဘူးခင်ဗျ။ တစ်ခါတလေ သူက ကိုယ် (Bartender) နဲ့ စကားပြောချင် ပြောနေမယ်။ တစ်ခါတလေ စိတ်ညစ်နေလို့ ဘယ်သူနဲ့မှ စကားမပြောချင်တာမျိုး၊ သောက်လိုက်ရမှ စိတ်ထဲ ပြေသွားနိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေ ရှိတတ်တယ်ပေါ့။ နောက်ထပ်မတူတဲ့ အမြင်တစ်မျိုးအနေနဲ့ ကျွန်တော် ဘားအနောက်မှာ အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါ စိတ်ကို တက်ကြွအောင် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တာကတော့ နေ့တိုင်း နေ့တိုင်း မတူတဲ့အရာတွေကိုပဲ အမြဲတွေ့ ကြုံနေရတာကိုပါ။ မတူတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ နေ့တိုင်း အမျိုးမျိုးသော ဧည့်သည်တွေက ကျွန်တော့်ကို တကယ်စိတ်ဝင်စားတက်ကြွစေပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ ဘားအလုပ်ဆိုတာ အကောင်းဆုံး အလုပ်ထဲမှာပါနိုင်တဲ့ အချက်တွေဟာဆိုရင် Flavour တွေကို အမျိုးမျိုးဖန်တီးနိုင်တယ်။ အရောင်တွေကို အမျိုးမျိုးတီထွင်ပြီး အရသာအသစ်အဆန်းတွေကို ဖျော်စပ်ပေးနိုင်တယ်။ တကယ်ကို အနုပညာဆန်တဲ့ အလုပ်လို့တောင် ပြောနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီအချိန်ဟာဆိုရင် တကယ်ကို အချိန်ကောင်းပါပဲ။ ဥပမာဆိုရင် ၁၉၉၉ နဲ့ အခု ၂၀၁၇ ဆိုရင် တကယ်ကို မတူကွဲပြားတဲ့ ကော့တေးလ်ဖျော်နည်းစနစ်တွေ ထွန်းကားနေပါပြီ။ Sarkies Bar ဟာဆိုရင်လည်း ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဆိုရင် အကောင်းဆုံးဘားလို့ ပြောလို့ ရသလို အခုဆိုရင် နောက်ထပ်လည်း ဘားတွေ ထပ်ဖွင့်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေထပ်ပြီး လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲ ကြည့်ကြရအောင်ပါ။
ဆရာ့အနေနဲ့ ဘယ်လို ဘားအမျိုးအစားတွေမှာ အတွေ့အကြုံတွေ ရှိခဲ့တာလဲ။ ဥပမာ အခု Sarkies Bar လို သီးသီးသန့်သန့် Classic Bar တွေလား၊ ဒါမှမဟုတ် . . . ။
သိပ်ကောင်းတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ။ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဲဒီမေးခွန်း မေးမိပါတယ်။ ဟိုတယ် ဘားဆိုရင်တော့ ဒီ Sarkies Bar က ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံပါပဲ။ ကျွန်တော့် ရဲ့ ၁၅ နှစ်သော လုပ်သက်မှာဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် ဘားအမျိုးအစား အစုံလုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ Sarkies Bar … ပုလင်းကစားတာတွေ ဘာတွေ လုပ်ကြတာပေါ့ဗျာ။ ပြီးတော့ Lounge Bar, Cafeteria, အခု Classic Bar ။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာအတွက်တော့ တကယ်ကို လုံလောက်နေပြီပေါ့ဗျာ။ အခုအသက်အရွယ်မှာ မတူညီတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ဘားတွေမှာ လုပ်ခဲ့ရတာတွေက ဘားပညာတွေကို ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာပဲ ရန်ကုန်မှာ တွေ့ကြုံရတဲ့ ကဏ္ဍအသစ် ကတော့ ပိုပြီးဆိတ်ငြိမ်မှုကို ခံစားရသလို ဧည့်သည်နဲ့လည်း တကယ်ကို အေးအေးဆေးဆေးစကားပြော ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် အသိပညာတွေကို ရှာဖွေနိုင်တယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ အချိန်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်တာပေါ့။
အခု ရန်ကုန်မှာရော ဘားတော်တော်များများကို သွားခဲ့ဖူးပြီလား။
တော်တော်များများတော့ သွားပြီးပါပြီ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က ပိုပြီး စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ ဘားလို့ မြင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အချင်းချင်းဆိုရင်လည်း တကယ်ကို တစ်စိတ်တည်း၊ တစ်ဝမ်းတည်းနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး အလုပ်လုပ်ကြတယ်။ အရင်တုန်းက မလုပ်ဖူးခဲ့တဲ့ အရာတွေတောင်မှ အားလုံးဟာ အခု တစ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်သွားတဲ့စိတ်နဲ့ အရာရာကို ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ကြတယ်။ ဘယ်လို ပိုကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေ ရလာမလဲ ဆိုတာကို အတူတကွ ကြိုးစားရှာဖွေကြတယ်။ ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းလိုပေါ့ဗျာ။ အားလုံးရဲ့ ကြိုးစားမှုမပါဘဲနဲ့တော့ အောင်မြင်မှုကို ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
သောက်စရာတွေထဲမှာဆိုရင် ဘာကို အကြိုက်ဆုံးလဲ။
ရေပါ။ ရေကို အကြိုက်ဆုံးပါ။ မနက်မိုးလင်းကတည်းက စသောက်ဖြစ်တယ်။ ရေမရှိရင် အသက်မရှင်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကတော့ သောက်စရာတွေထဲမှာဆိုရင်ပေါ့ဗျာ။ ကော့တေးလ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ Negroni Cocktail ပါ။ သူက အခါးနဲ့ အချိုက တကယ်ကို ညီမျှပြီး Classic Italian ကော့တေးလ်တစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ညနေစာမစားခင် သောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် နောက်တစ်မျိုးကတော့ ကျွန်တော် ဘီယာသောက်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း ဘားမှာလုပ်တယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ချိန်လုံး ကော့တေးလ်ကြီးပဲ သောက်နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကော့တေးလ်ကိုတော့ ဖန်တီးမှုတွေ ကိုယ်ပိုင် creation တွေက ကျွန်တော့်ကို တကယ် စိတ်တက်ကြွစေပါတယ်။ အခြားသော mixologist တွေလိုပါပဲ။
ကော့တေးလ်တွေ ဖျော်တဲ့အခါမှာ ဘယ်အရက်အမျိုးအစားက ဖျော်လို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါမယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။ ဆရာ့ရဲ့ အမြင်ကလေး တစ်ချက်ပြောပြပေးပါ။
နိုင်ငံအနေအထားတွေနဲ့ကတော့ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ မတူပါဘူး။ ပြောရရင်တော့ အခုခေတ်မှာ ဂျင်က ပြန်လည်ထင်ရှားလာပြန်ပါတယ်။ အခု ဒီဘားမှာဆိုရင် ဂျင်ကို ပြန်လည် ရောနှောဆန်းသစ်ပြီး တီထွင်ထားပါတယ်။ Local Spice တွေနဲ့ပါ။ ရန်ကုန်မှာတော့ လူတော်တော်များများက ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဝီစကီကို ပိုပြီး အကြိုက်တွေ့ကြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဘားမှာလည်း Single Malt Whisky နဲ့ အခြား ဝီစကီ တော်တော်များများကို တင်ထားပါတယ်။ ကော့တေးလ်မီနူးထဲမှာဆိုရင်တော့ အမျိုးအစား စုံစုံလင်လင်နဲ့ ကြိုက်တာကို ရွေးချယ်လို့ရအောင် ထည့်ထားပါတယ်။
အခုအချိန်မှာပေါ့နော် . . . မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဘားတွေက များလာပြီ။ ပိုပြီးလည်း ဖွံ့ဖြိုးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ဘားမှာ ဖျော်စပ်တဲ့ အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ သူတွေထဲမှာ သင်တန်းကျောင်းမှာ သင်တန်းတက်တာကောင်းတယ်။ တချို့က လည်း ဘားမှာ ကိုယ်တိုင် အလုပ်ဝင်လုပ်ပြီး သင်ယူတာ ကောင်းတယ် စသဖြင့် ကွာခြားနေတဲ့အပေါ် ဆရာ့အနေနဲ့ ဘယ်လိုများပြောချင်ပါသလဲ။
ကျွန်တော် ၁၀ဝ ရာခိုင်နှုန်း ပြောချင်တာကတော့ Bartender ကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ဆရာကောင်းနောက်ကို လိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်အရ ကျောင်းကို သွားဖို့ သင်ယူဖို့ဆိုတာကတော့ ဥပမာပြောရရင် ဘာသာစကား သင်ယူသလိုပါပဲ။ ကျောင်းမှာ ဘာသာစကားကို အခြေခံ တွေတော့ လေ့လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီထက်မက အသုံးချချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သေချာတယ်။ အဲဒီ ဘာသာစကားလာတဲ့ နေရာမှာ၊ ဒါမှမဟုတ် အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာ နေကိုနေရမှာပါပဲ။ ဥပမာပြောရရင် မြန်မာဘာသာစကားကို သင်မယ်ဆိုရင် ဟုတ်ပြီ၊ ရန်ကုန်မှာနေတယ်။ နောက်တစ်နှစ်လောက်နေမယ်ဆိုရင် သေချာတယ်။ အဲဒီဘာသာစကားကိုပြောဖို့ဆိုရင် ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာမယ်။ ပိုပြီးလည်း တိုးတက်လာမယ်။ အဲဒီလိုမျိုး ဘားပညာရပ်ကိုပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ထိတွေ့တယ်။ ရနံ့ကို မှတ်သားကြမယ်။ မင်းရဲ့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဘားထဲမှာဆိုရင် ပိုပြီးတိုးတက်လာမယ်။ Bartender တိုင်းမှာ သူ့ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်း အမျိုးမျိုးပိုင်ဆိုင်ကြ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ အဲဒီပေါ်မှာ တည်မှီပြီး အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ အခု ဘားထဲမှာ ဆိုရင် ကျွန်တော်ပြောပြပေးတယ်။ ဘယ်အရာလေးက ပိုပြီးကောင်းမွန်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရ တယ်ဆိုတာကို ပြောပြတယ်။ ကျောင်းမှာဆိုရင်တော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။ ပိုပြီး စာအုပ်ဆန်တာပေါ့။ အဲဒါ ကို ကျွန်တော် မကြိုက်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်း အဲဒီပရိုကျောင်းကြီး တက်ခဲ့ရတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အစ်မကပဲ အားလုံးသင်ပေးသွားခဲ့တာ။ ဘယ်အရာက ဘယ်လိုလုပ်ရတာ အသေးစိတ်ပေါ့။ နောက် ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့ ဒုတိယ ဆရာကတော့ Mr. Alexander ပါ။ သူက ကျွန်တော့်ကို ဘယ်လို မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သင်ပေးခဲ့တာ။ သူပြောတာလေး မှတ်မိနေသေးတယ်။ “ငါတို့က Ferrari ကားနဲ့တောင် ပိုတူသေးတယ်တဲ့။ ဘားဆိုတာကတော့ သေးသေးလေး။ အဲဒီထဲမှာမှ ငါတို့က Ferrari လိုမျိုး အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်ကိုင်ကြရတာ” တဲ့။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အမြင် ပြောရမယ်ဆိုရင် သင်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ မင်းရဲ့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဘားထဲမှာ ရှိနေတဲ့အချိန်တွေဟာ သင်ယူဖို့ တကယ့်အချိန်ကောင်းပါပဲ။
ဆရာ အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေထဲကမှ မမေ့နိုင်တဲ့ ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံလေးတွေကို ပြောပြ ပေးပါလား။
သေချာတာပေါ့။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံကတော့ ပထမဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ ဘားပါပဲ။ ပထမဆုံးအလုပ်၊ ပထမဆုံး Customer နဲ့ ပထမဆုံး စတင်လုပ်ဖူးခဲ့တဲ့ ကော့တေးလ်လေးဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ မမေ့နိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံလေးပါ။ ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ ကော့တေးလ်လေးကိုသောက်ပြီး “ဟာ… မိုက်တယ်။ ငါကြိုက်တယ်။ ဒါမင်းပထမဆုံး လုပ်ဖူးတဲ့ ကော့တေးလ်လား” ၊ “ဟုတ်တယ်… ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံး ကော့တေးလ်လေး ပါပဲ။” အဲဒီလို ပြန်ပြောလိုက်ရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးဟာ ကျွန်တော့်အတွက် မမေ့နိုင် စရာပါပဲ။ ပိုပြီးတော့လည်း ကျွန်တော့်အနာဂတ်အတွက် စိတ်ဓာတ်တက်ကြွပြီး သေချာသွားစေခဲ့တယ်။ နောက်ထပ် အတွေ့အကြုံလေးကတော့ Vogue Lounge, သိတယ် မဟုတ်လား။ ဘန်ကောက်ကလေ။ တကယ်ကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဂျေဘော ရော့စကီးဆိုတဲ့ ကော့တေးလ်၊ မီနူးထဲမှာမပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ စဉ်းစားပြီးလုပ်ရတာ။ ကိုယ်ပဲ Customer စိတ်ကျေနပ်အောင် ကြိုးစားလုပ်ခဲ့ရတာပေါ့။ အဲဒါတွေက မမေ့နိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံလေးပေါ့။ ကိုယ့်အတွက် စိန်ခေါ်မှုလေးလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အခု Skarkies Bar လေးကတော့ မတူဘဲ ကွာခြားတဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေပေါ့။ ကျွန်တော်တို့က ပိုပြီး မိသားစုလည်းဆန်တယ်။ ပိုပြီးလည်း နားလည်နီးကပ်ပြီး Five Stars Hotel ရဲ့ ပုံရိပ်နဲ့လည်း အကောင်းဆုံး သင့်တော်တဲ့ ဘားဖြစ်အောင် လုပ်ကြတယ်။ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်လည်း ကြိုးစားနေတယ်။ ရန်ကုန်မှာလည်း အကောင်းဆုံးဖြစ်ရမယ်ပေါ့။ အဲဒါကြောင့် ဧည့်သည်တွေကို ဝင်လာတဲ့ အချိန်ကနေ စလို့ နောက်ဆုံး ပြန်သွားတဲ့အချိန်အထိ ၁၀ဝ ရာခိုင်နှုန်း အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။ ဈေးနှုန်းတွေက အပြင်ထက်စာရင် နှစ်ဆဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်း နှစ်ဆလို့လည်း မဆိုသာပါဘူး။ အဲဒီဈေးနှုန်းတွေထဲမှာမှ ကျွန်တော်တို့ စိတ်ထက်သန်မှုတွေ အကောင်းဆုံးသောအရာတွေ ထည့်ထားတဲ့အတွက် ဧည့်သည်တွေကလည်း နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လာချင်လာအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Bar တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဘယ်အရာက အရေးအကြီးဆုံးလို့ ထင်ပါသလဲ။
တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အမူအကျင့်ပါ။ ကျွန်တော်လည်း အကောင်းဆုံးလူလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အမှားဆိုတာကလည်း ကိုယ်ပြန်လည် လေ့လာသင်ယူနိုင်ဖို့ပါပဲ။ နောက်တစ်ခုက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လေးစားမှုပါ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ တစ်ယောက်ချင်းစီ လေးစားမှု ရှိရမယ်။ အဲဒါအရေးအကြီးဆုံးပါပဲ။ အဲဒါမှ ဧည့်သည်ကို လေးစားဖို့ သင်ယူနိုင်ပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ General Manager ပြောသလိုပဲ။ အားလုံးက ချိန်းကြိုးတစ်ခုလိုပါပဲ။ တစ်ခုပြတ်သွားတာနဲ့ အားလုံးပြတ်သွားတော့တာပဲ။
ဒီဘားထဲက မဟုတ်ရင် Mr. Moretti အခြားအပြ ဘယ်လိုအရာမျိုးတွေကနေ စိတ်အပန်းဖြေဖို့ စိတ်ရွှင်လန်းတက်ကြွဖို့ကို ရှာဖွေဖြစ်ပါသလဲ။
စိတ်အပန်းဖြေဖို့အတွက် ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ ကျွန်တော့်မိသားစုပါပဲ။ နောက်ပြီး ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းကဆိုရင် တစ်စုံတစ်ယောက်ဆီက အနံ့တစ်မျိုးရတယ်။ ဒါဘယ်သူဆိုတာ တန်းသိသွားတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးပဲ။ ဘယ်သူက ဘာကို ကြိုက်တတ်လေ့ရှိတယ်။ သူ့အကြိုက်ကို အမြဲမှတ်မိနေတယ်။ အဲဒါမျိုးလေးတွေကို မှတ်ထားရတာ တကယ်ကို ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျွန်တော် အမိမြေ အီတလီမှာတုန်းကပေါ့။ အခုအချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာဒေသက အရာတွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က မျှဝေပေးချင်တယ်။ ကိုယ့်ဧည့်သည်တွေကို ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်။ ဘာတွေ ရနိုင်တယ်ဆိုတာတွေကိုပေါ့။ ကိုယ့်ဘာသာလည်း အိမ်မှာ စမ်းသပ်ဖျော်သောက်လို့ ရတယ်လေ။ ဥပမာ – “အဲဒါလေးကတော့ မြန်မာလက်ဖက်ခြောက်လေ။ အဲဒီ ကော့တေးလ်မှာပါတာ” “ဟုတ်လား… ငါတို့ဆီကလား” အဲဒီလိုလေးတွေ နိုင်ငံခြားက လာတာတွေထက်စာရင် ဒီပြည်တွင်းက အရာတွေကို အားပြုပြီး ဖျော်စပ်ရတာ၊ ဖန်တီး စူးစမ်းရှာဖွေရတာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အပန်းဖြေနည်းတစ်မျိုးပါပဲ။
အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာ လူတွေတော်တော်များများက အရင်ကလို ကော့တေးလ်တို့၊ အရက်တို့ကို သူ့ချည်းပဲ ရောနှောဖျော်စပ်တာ မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ ဆေးဖက်ဝင် သစ်သီးသီးနှံတွေ၊ အမွှေးအကြိုင်တွေကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုမှု များလာတာ တွေ့နေရပါပြီ။ အဲဒါကောင်းတယ်လို့ထင်လား၊ မကောင်းဘူးလို့ ထင်လားဆိုတာ ဆရာ့အမြင်ကလေး ပြောပြပေးပါ။
အဲဒါ အရမ်း အရမ်းကို ကောင်းတာပေါ့။ အခုကျွန်တော်တို့ဆီမှာဆိုရင်လည်း ကိုယ်ပိုင် အရက်မွှေးတွေ၊ ကိုယ်ပိုင် Bitters တွေ၊ ကိုယ်ပိုင်အဆီထုတ်ထားတဲ့ အမွှေး အကြိုင်တွေ ရောနှောထားတဲ့ အရက်အမျိုးအစားတွေ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သုံးတဲ့ အားလုံးသော အမွှေးအကြိုင်တွေ၊ Herbs တွေ၊ Spice တွေကို ကျွန်တော်တို့ Kitchen ကနေ အကုန်လုံး ကူညီပြီး လုပ်ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စားဖိုမှူးဟာဆိုရင်လည်း တကယ်ကို တော်ပြီး ပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ ဟင်းပွဲတွေ ချက်လုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာ သူ့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေက တကယ်ကို အကူအညီအထောက်အပံ့ ဖြစ်စေပါတယ်။ နောက်တစ်ခု အရေးကြီးတာကတော့ ရေခဲပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာသေချာ အေးခဲထားတဲ့ ရေခဲအမျိုးအစားကို သုံးပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်မယ့် ကော့တေးလ်အမျိုးအစား၊ ဖန်ခွက်အမျိုးအစားပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အရွယ်အစားကအစ သေချာလုပ်ထားတဲ့ ရေခဲအမျိုးအစားတွေကိုပဲ အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဘယ် Drinks ကိုမဆို ကျွန်တော်တို့ ဧည့်သည်ကိုပေးတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့မှာ ဘယ်လိုလုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ ဟာလေးကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ပြောပြနိုင်တယ်။ အဲဒီတော့ ဧည့်သည်ကလည်း သောက်ရတာ ပိုစိတ်ဝင်စားပြီး ပိုပျော်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ တကယ်တမ်း ဈေးလေး နည်းနည်းမြင့်တယ်ဆိုတာကလည်း အဲဒါမျိုးလေးတွေ ပါပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ ဘားမှာ ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ သူ့အချိန်နဲ့သူ Live, DJ, Performance စတာတွေပါ။ နောက်မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော်တို့ဘားကို အခြားနိုင်ငံတွေက ကော့တေးလ်ပညာရှင်တွေကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ဖို့ရှိပါတယ်။ စင်ကာပူ၊ ဒူဘိုင်း စတဲ့ နိုင်ငံတွေကပါ။
အခု ရန်ကုန်က ဘားတွေမှာ Molecular Cocktail လို့ခေါ်တဲ့ အနုစိတ်ပြီး သေချာလုပ်ရတဲ့ ကော့တေးလ်အမျိုးအစားတွေ လုပ်လာကြတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီအပေါ်မှာရော ဘယ်လိုထင်ပါလဲ။
အဲဒါကတော့ နည်းစနစ်တစ်ခုပါပဲ။ တကယ်တမ်းပြောရရင် အဲဒီ Molecular Cocktail ဆိုတာ ခေတ်နောက်ကျနေပြီလို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အာဆီယံကိုတော့ အခုမှရောက်တာဖြစ်လို့လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၂၀ဝ၂၊ ၂၀ဝ၃ မှာ ကျွန်တော် ပြင်သစ်မှာ အလုပ်စလုပ်နေတဲ့ အချိန်ကတည်းက အဲဒီပညာကို လူတွေ စိတ်ဝင်စားပြီး လုပ်လာနေကြပါပြီ။ များသောအားဖြင့် Fine Dinning တွေမှာ ဟင်းပွဲတွေကို အလှအပဆင်ဖို့ လုပ်လာကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြာကြာတော့ မခံဘူးပေါ့။ အခု ရန်ကုန်မှာတော့ ခုမှပဲ တွေ့ဖူးတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘားမှာလည်း အဲဒီလိုမျိုးလေးတွေ ထည့်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၀ဝ ရာခိုင်နှုန်း Molecular ကော့တေးလ်ဘားတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ဧည့်သည်က Molecular Cocktail သောက်ချင်တယ်။ ဟာ . . . ရတာပေါ့။ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လာရင် သေချာတယ်။ သောက်ရစေရမယ်။ အဲဒီလိုမျိုး ကျွန်တော် တို့ဆီမှာ ကန့်သတ်ချက်မထားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဟုတ်ပါတယ်။ Molecular Cocktail ကိုတော့ အခုအချိန်မှာ စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ဆိုပေမယ့် နိုင်ငံတကာအတိုင်းအတာနဲ့ ဆိုရင်တော့ ရိုးနေပါပြီဗျာ။ ဒါပေမဲ့လည်းလေ အခြေအနေအရ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေလုပ်ကြမလဲ ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပေါ့။
ဟုတ်ကဲ့။ မေးချင်တာလေးတွေတော့ ဒီလောက်ဆိုရင် ပြည့်စုံသွားပါပြီ။ Mr. Moretti အနေနဲ့ မြန်မာဘားလောကကိုရော၊ မြန်မာ Bartender တွေကိုပါ ဘာတွေများ စကားလက်ဆောင် ပါးချင်ပါသေးသလဲ။ ပြောချင်တာများရော ရှိပါသလား။
မြန်မာနိုင်ငံက Bartender တွေကို ပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ဘားကနေ ကြိုဆိုပါတယ်လို့။ လာခဲ့ပါ။ Drinks လေးတွေကိုလည်း မြည်းစမ်းကြည့်ကြပါ။ ဘားနဲ့ပတ်သက်တာတွေ သိချင်တာတွေ၊ မျှဝေချင်တာတွေ ရှိရင်လည်း အချိန်မရွေးပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့က အရာရာကို မျှဝေကြပါတယ်။ နောက်ထပ်ပြောချင်တာကတော့ မြန်မာ Bartender တွေဟာ တော်တော်များများက ငယ်လည်း ငယ်သေးတယ်။ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေလည်း ပြင်းပြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စိတ်ပါဝင်စားတဲ့အရာ နောက်ကိုပဲလိုက်ပါ။ အတွေးတွေ မများကြပါနဲ့လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်ဆိုရင်တော့ ဘားအလုပ် ဆိုတာ ကမ္ဘာမှာ အကောင်းဆုံး အလုပ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။